Posted by တန်ခူး at 10:56 AM
I think u advertisement both including ur beloved one.
သက်ဝေလဲ အဲဒီကြော်ငြာကို ကြိုက်နေတာ...
အခုလို ဓါတ်ပုံလေးတွေအဖြစ် မြင်ရတာ သဘောကျစရာ...။
(စိတ်ရှည်ရှည် ဓာတ်ပုံစောင့်ရိုက်ပေးသော မောင့်ကို ကျေးဇူး။) အဟိ...
မုန်းပါတယ်မောင့်ကို…. (ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအမည်)……..အဲဒီ လူကြီးကို။ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်သွားတယ်။
photo တွေကို ကြိုက်တယ်ဗျာ။
မမရဲ့ အားပေးမူနဲ့ကျွန်တော်လည်း posting အသစ်ရေးထားပါတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေ အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါကောင်းကင်ကို။
ဓာတ်ပုံတွေကြိုက်တာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ် အောင်ကျော်ထွတ်။ postအသစ်လေးအားပေးပြီးပြီ။
ဓာတ်ပုံတွေက မောင် ရိုက်တာလား။ ပြောလိုက်ဗျာ…၊ အဲဒီ မောင်ကို…၊ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်ရင် ကျနော်တို့ ကြော်ငြာ အလုပ် အတူတူ တွဲလုပ်ကြမလားလို့။ မြတ်ရင် အကျိုးတူ၊ အရှုံးပေါ်ရင် ဓာတ်ပုံသမား တာဝန်လို့။ :P
ကိုစေးထူးရေ...သူကလဲစိတ်ဝင်စားပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ရှူံးလဲအတူပေါ့နော်။